पाटनका डाक्टरको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र- उकुसमुकुस भइसक्यो! – नेपाली सूर्य
October 28, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on पाटनका डाक्टरको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र- उकुसमुकुस भइसक्यो!
समाचारहरूमा ‘पाटन अस्पतालमा धेरै कोरोना ग्रसित बिरामी मर्छन्’ भनेर आउँछ। समाचारले गलत बोलेको होइन। तर भित्री सत्य लुकाएको हो वा थाहा नपाएको हो?
सबभन्दा कठीन क्षण त्यो जस्तो लाग्छ, जब कुनै बिरामी बित्छ र उसका फाइल पल्टाएर घरमा बसेको उसको आफन्तको फोन नम्बर पत्ता लगाइन्छ। अनि फोन गरेर यताबाट भनिन्छ– ‘म पाटन अस्पतालको कोभिड आइसियुबाट ड्युटी डाक्टर बोल्दैछु। एउटा नराम्रो खबर छ।’
बुढी हजुरआमै हाम्रा बारेमा आमाबुवालाई सोध्नुहुन्छ रे। बुवाले बेलाबेलामा टाढै उभिएर हामीलाई सुनाउनु हुन्छ। त्यस्तो सुनेपछि मन थाम्न सकिन्न र ढोकैबाट भए पनि ‘आमा के छ? ठीक छ?’ भनेर सोधिन्छ।
हजुरआमाको पनि सहज उत्तर आउँछ– ‘ठीक छ।’
‘भेट्रान’ नेताहरू जन्माएको नुवाकोटकी हुनुहुन्छ हाम्री हजुरआमै। उबेला घर लिपपोत गर्दा आफ्ना दाइहरूले सिलोटमा लेखेका अक्षर र पढेका आवाज टपक्कै टिपेर पढ्न सिक्नुभएकी हाम्री हजुरआमै उस्तै परे अहिले पनि पत्रिकाका बडा-बडा हेडलाइन पढ्न सक्नुहुन्छ। आँखा तगडा छन्, कान टाठा।
‘पढ्न पा’की भए, देश देख्न पा’की भए म प्रधानमन्त्री बन्थेँ,’ हजुरआमा लाइट नोटमा यस्ता लाइन बोलिरहनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, नुवाकोटको कुरा गर्दा भुइँचालो ताका त्यतातिर ‘हेल्थ क्याम्प’ लिएर गएको याद आयो। बाटो ध्वस्त थिए।
प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रै कोभिड आइसियूमा वीरगञ्जका एक युवा नेता भर्ना हुनुभएको थियो। कोरोनाले गर्दा धेरै दुःख पाउनु भयो उँहाले। लामो समयको अस्पताल बसाइपछि अहिले ठीक हुनुहुन्छ। हरेक पटक उहाँसँगको कुराकानीमा मैले एउटा अनौठो किसिमको ऊर्जा महसुस गर्थेँ। सायद नेपालले खोजिरहेको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ त्यस्तै ऊर्जावान युवा नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ।
‘जवान मान्छेलाई केही हुँदैन’ भनौंला हामी तर आफ्नै कारणबाट अरू मानिस संक्रमित हुने भय यो युगका प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीका मनमा छ। सामाजिक दुरी त ठीकै हो, अब त साथीभाइ आफन्त पनि कसरी हुन्छ घरमा नआऊँ, कसरी हुन्छ नभेटौं भने जस्तो गर्नुहुन्छ हामीसँग। यसले बढाएको भावनात्मक दुरी सामाजिक दुरीभन्दा कहालीलाग्दो छ।
यत्रो जोखिम मोलेर काम गर्‍यो, जोखिम भत्ता, प्रोत्साहन भत्ताको नामनिशान छैन। प्रोत्साहन त कहाँ हो कहाँ, हामीलाई त आजकल ‘किड्नी व्यापारी’ समेत भन्न थालिएको छ। कति स्वास्थ्यकर्मी फ्रन्टलाइनमै कुटिएका छन् र गाली बेइजतीका शिकार भएका छन्।
हातमा ‘स्मार्ट’ फोन बोक्ने नेपालीको मन मगजमा भरिएको यो ‘इडियट’ पन कहिले जाने हो? थाहा छैन। यसरी हुलहुज्जत गर्नेहरुलाई बिना जमानत जेल चलान गर्ने कानुन ‘जेल विथआउट बेल’ ल्याउन अझै कति स्वास्थ्यकर्मी कुटिनुपर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू?
प्रधानमन्त्रीज्यू, यस्तो महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिएर काम गरिरहेको अस्पताल र यसका मानव संशाधनलाई सम्मान र उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र सोही अनुरुपको सरकारी ‘सपोर्ट’ हुनुपर्छ जस्तो हजुरलाई लाग्दैन?
गत साता मात्रै हाम्रै अस्पतालमा हजुरकै बहालबाला शिक्षामन्त्रीज्यू कोरोना संक्रमित भएर भर्ना हुनुभएको थियो। बिहान बेलुकी पिपिई लगाएर राउन्ड लिन जाँदा यी सबै बह-वेदना उहाँसँग पोखौं झैं लागेको थियो।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं त हँसी मजाक र उखानटुक्का मन पराउने मान्छे। हाँसो स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि राम्रो हो। प्रधानमन्त्रीका हैसियतले गरेका युग सुहाउँदो निर्णय र कामले ‘दुनियाँलाई हँसाउनु’ र बोलेका वाक्यले ‘दुनियाँ हँसाउनु’ बीच निक्कै गहिरो अन्तर छ। यो कुरा तपाईंलाई पक्कै पनि हेक्का छ।
यी हरफ लेखिरहँदा एप्पल कम्पनीका मालिक स्वर्गीय स्टिभ जब्सले भनेका वाक्य याद आइरहेछन्- हरेक दिन बिहान उठदा सोच्नु रे, आज मेरो जीवनको अन्तिम दिन हो।’
नेताहरु भागवण्डा र भ्रष्टचारबाट पेट भर्छन् जनता गास बास र कपासको अभावले मर्नेछन